High-Quality Linear upfu zvekupfakira muchina fekitari uye vagadziri | Brightwin
Katoni chiputiriso Machine
Linear upfu zvekupfakira Machine
The Linear upfu zvekupfakira muchina anogona kupedzisa kuyera, achizadza, etc.
muchina uyu adopts Auger filler uye maviri anoita servo injini kudzora zvinodiwa mari dzakakwirira zvakarurama. The muchina wakagadzirwa Stainless simbi 304 uye Stainless simbi 316L kuti chigadzirwa kubatwa chikamu.
Shandisa yakakwirira utetsa yemagetsi takatsiga pasi bhodhoro kana aguta, ziva kaviri cheki kurema (auger uye zvemagetsi nepakati), ayo zvikuru kunyatsoenderana.
, zviri nani kuti kurongedza weupfu zvinhu kuti zviri nyore kuti kuyerera, kufanana wemhuka zvinodhaka, upfu mukaka, carbon guruva, talcum upfu, chaizvoizvo etc. The muchina anogona kupedzisa kuyera, achizadza, etc. Pamusana yepakutanga zvakagadzirwa
muchina uyu adopts Auger filler maviri anoita servo injini kudzora zvinodiwa mari dzakakwirira zvakarurama. Zvakakodzera zvinodiwa upfu kupinda pre-yakaitwa mabhegi uye nehombodo kana zvimwe mumagaba. The muchina wakagadzirwa Stainless simbi 304 uye Stainless simbi 316L kuti chigadzirwa kubatwa chikamu.
1. Servo injini uye kushumira mutyairi kuti kudzora auger, ayo yakatsiga dzakakwirira chaiwo.
2. PLC kuzvidzora, musabata nechidzitiro munhu-kombiyuta dislay nyore ishande.
3. With huruva rokutsvaira mudziyo.
4. Adopts ruoko vhiri kuchinja zvinodiwa musoro urefu, nyore kuchinja zvakasiyana bhodhoro hukuru.
5. Linear chinjikira mhando, kavha nharaunda duku, nyore yokushambidza.
6. Fixed auger mamiriro, pasina kusvibiswa simbi.
7. Use yakakwirira utetsa yemagetsi takatsiga pasi bhodhoro kana aguta, ziva kaviri cheki kurema (auger uye zvemagetsi nepakati), ayo zvikuru kunyatsoenderana.
8. Adopts mitsetse miviri misoro miviri kuti kuwedzera nokukurumidza.
Power zvitengeswa: 380V / 50HZ (inogona customized)
Total simba: 1.6KW
capacity: 10-80b / Maminitsi
akazadza zvakarurama: ≤0.5%
divi: 2000 × 970 × 2030mm (L & W & H)
Previous: Kunyora Machine
Next: Thick sticky liquid filling machine
Automatic Powder Kuzadza Machine
Upfu Bottle achizadza Machine
Upfu Kuzadzikisa Machine Small
Salt Powder Kuzadza Machine
Small Kuzadzikisa Powder Machine
Small bhodhoro upfu zvekupfakira uye capping muchina
Bouillon Cube putira Machine, Filling Machine, Bouillon Cube Machine ,沪ICP备18018895号-1